हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण - Internet Khabar
Home Health हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण
हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण
दुईचार दिन झमझमायो र निको भयो भने केही गर्नुपर्दैन । लगातार लामो समय झमझमायो भने अस्पताल गइहाल्नुपर्छ । सुरुमा ब्लडमा सुगरको मात्रा जाँच्नुपर्छ। त्यसपछि बाथरोग भएको वा नभएको छुट्याउन जाँच गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रियागत रुपमा जाँच गर्दा केही देखिएन भने साइक्याष्ट्रिक र न्युरोलोजिष्ट वा न्युरो सर्जनलाई देखाउनुपर्छ।
Previous articleमुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? चिन्ता नलिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय
Next articleयी हुन् दुखाई कम गर्ने घरेलु उपाय